सम्बृद्ध नेपालको लागि जापानी व्यवस्थापन - Samudrapari.com
सबै क्षेत्रमा “स्थिर सरकार र सम्बृद्धि नेपाल” बनाउने बहस शुरु भएको छ । यो अभियानमा केहि विकासका मोडलहरुको बारेमा व्यापक छलफल, चर्चा र चासो बढेको छ । विदेशमा बसेर परिश्रम गरिरहेका नेपालीहरुको भावना नेपालमै परिश्रम गरि भावी पुस्ताले गर्व गर्न लायकको नेपाल बनाउन सहयोगी बनांै भन्ने रहेको छ ।
नेपालमा जनताले आफ्नो संविधान आफैं (आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत) जारी गरि स्थानीय तह, प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात सबै क्षेत्रमा अबको बहस “स्थिर सरकार र सम्बृद्ध नेपाल” बनाउने अभियानको हुनु पर्छ भन्ने रहेको छ । सम्बृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा केहि विकासका मोडलहरुको बारेमा व्यापक छलफल अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सर्बत्र चर्चा र चासो बनेको छ । विशेष गरेर विदेशमा बसेर परिश्रम गरिरहेका नेपालीहरुको भावना उपयुक्त बाताबरण बनि नेपालमै परिश्रम गरि आफ््नो भावी पुस्ताले गर्व गर्न लायकको नेपाल बनाउँन सहयोगी बनांै भन्ने रहेको छ ।
सम्बृद्ध नेपाल बनाउने बहस
यसै हप्ता विदेशमा रहेर अथक परिश्रम गरि सबृद्धि हासिल गरेर आफ्नो पृथक पहिचान बनाई रहेका केहि व्यक्तिहरु सँग छलफल गरियो । उहाँहरुको चासो नेपालको सबृद्धिको विषयमा व्यापक बहस अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने रहेको पाइयो । सबै जागरुक नागरिकले, पेशाकर्मीले, प्राज्ञिक एवं बौद्धिक व्यक्तिहरुले आफ्नो बौद्धिकता, सोच, चेत र सिकाई तथा अबधारणाहरुलाई सार्बजानिक बहसमा ल्याउनु पर्छ भन्ने आसय रहेको पाइयो । यो बहस हाम्रो पुस्ताले आफ्नै जीवनकालमा सम्बृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा सहभागि भई सम्बृद्ध नेपालको नागरिकको रुपमा संसारमा आफ्नो विशिष्ठ पहिचान बनाउन सफल हुन सक्नेछौं भन्ने आत्म विश्वास पनि हो ।
सिङ्गापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया र जापानको चर्चा
छलफलको क्रममा कोहिले नेपालको अबको विकासको मोडेल सिङ्गापुरको लि क्वान यु को मोडल जस्तै भनिरहेका छन । कोहि भन्छन, अब नेपालले मलेशियाका मोहम्मद महाथिरको मोडल हेरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैगरि तेश्रो आयाम दक्षिण कोरियाका पाक्चुन हि को मोडेल भन्नेहरु पनि कम रहेनछन । चौथो धारणा दोश्रो विश्वयुद्धको भिषण आक्रमणमा परेर अत्याधिक क्षति व्यहोरेको देश जापानको विकासको मोडलमा हामी पनि विकास गर्न सक्छौं भन्नेपनि छन ।
यी चारै देशका विकासका आयाम अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेका छन । त्यस भित्रका कथाहरु त्यत्तिक्कै रोचक छन । प्रेरणादायी छन । ती देशहरु के कसरी विकसित भए ? विकासका मोडलहरु के के थिए ? व्यवस्थापनका कुन कुन विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको प्रयोगबाट ती राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको सम्बृद्धि हासिल गरेका हुन ? ती कुरा नेपालमात्र होइन विश्वभर व्यापक रुपमा प्राज्ञिक बहस, छलफल र गहन अध्ययनका विषय बनेका छन । त्यस सम्बन्धी थुप्रै प्रकाशनहरु पनि छन ।
जापानी व्यवस्थापन र कार्य संस्कृतिको बहस
आज यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय भने जापान, सिंगापुर, मलेशिया र दक्षिण कोरिया जस्ता एशियाका विकसित देशहरु मध्येकोे दोश्रो विश्वयुद्धको भिषण आक्रमणको शिकार बनि अत्याधिक क्षति व्यहोरेको देश जापानले गरेको विकासको मोडलबाट हामीले पनि केहि सिकौं भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । आगामी आलेखहरुमा अन्य विकासका अबधारणा र मोडेलहरुका बारेमा समेत चर्चा परिचर्चा गरिने नै छ । यो आलेखको बहसको विषय भने जापानीहरुको विद्यमान कार्य संस्कृति र व्यवस्थापकीय अबधारणहरुबाट हामी पनि सिकौं भन्ने नै हो ।
सबैले सबैको सम्मान गरौ
ओहायोगोदाइमास जापानीहरु प्रत्येकले प्रत्येकलाई सम्मानपूर्वक गर्ने आदर बाचक विहानीको अभिवादन हो यो । जसको अर्थ हुन्छ शुप्रभात (अर्थात नमस्कार) जापानीहरु सबैले सबैलाई सम्मान गरौं भन्ने संस्कार र संस्कृतिमा हुर्केका हुन्छन । कार्यालयमा पियनदेखि जीएमसम्म सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति छ । जब हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानको संस्कृति विकास गर्छौ ।
आफ्नो भाषा संस्कृति प्रति गर्व गरौं
राष्ट्रिय भाषा संस्कृतिप्रति गर्व गर्ने, आफ्नो भाषा संस्कृतिको सम्मान गर्ने जापानीहरुको आफ्नो राष्ट्रिय भाषा र संस्कृतिको सम्मान र त्यसको अभ्यासबाट नै मौलिक विकास हुनसक्छ भन्ने जापानीहरुको मान्यता रहेको पाईन्छ ।
विद्यालय शिक्षाको प्रारम्भिक तह कक्षा आठ पुरा गरेका बालबालिकाहरु सबैले राष्ट्रिय भाषाको अध्ययन गर्दछन । जापानीहरु खान्जी भाषा जसमा धेरै विषयहरु पढ्न पाउँछन । यसको सम्मान गर्दै अन्तराष्ट्रिय भाषामा भएका प्रकाशन तथा प्रकाशनहरुलाई पनि जापानी भाषामा अनुवाद गरि आफ्नो भाषाको प्रवद्र्धन गरिन्छ । यसरी आफ्नो भाषा संस्कृतिको प्रबद्र्धनबाट अपनत्वको भाव बढ्छ । आफ्नो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज प्रति गर्व गर्ने जापानीहरुको संस्कारको कारण नागरिकहरुको राष्ट्रियताप्रतिको जागरण बढ्छ र विकासको आधारशिला नै राष्ट्र प्रेम हो ।
बालबालिकाहरुलाई के सिकाउने
जापानी प्राथमिक तहका बालबालिकाहरु विद्यालयमा आफ्नो भाषा, संस्कार संस्कृति, जनजीवन रहनसहन रीतिरिवाज प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दै सिक्छन । बालबालिकाहरु खेति लगाउने सिजनमा खेतमा गएर हिलो माटोमा, पानीमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर सिक्छन । धान काट्ने समयमा पनि धान काटेरै सिक्छन ।आनी बानी, खाने, बस्ने, संस्कृतिको बारेमा प्रयोगात्मक किसिमले सिकाउँछन । आफ्नो देशको बारेमा भूगोलको बारेमा घुमेरै सिक्छन । संग्राहलयमा गएर इतिहास संस्कृति आदिको बारेमा सिकाईन्छ । यस्तो सिकाईले बालबालिकाहरुमा राष्ट्रप्रेमको भावना विकास हुन्छ । नागरिकहरुमा राष्ट्रप्रेम आफ्नो संस्कृतिप्रतिको सम्मान गर्ने संस्कार संस्कृतिको विकास भएमा मात्रै राष्ट्र सम्बृद्ध हुन्छ भन्ने संस्कृतिको विकास हुन्छ ।
बालबालिकाहरुलाई आफ्नै वरिपरिको परिवेशको बारेमा कथा, कविता, हाईकु, लेख, निबन्ध, नाटक आदिबाट सिकाईन्छ । बा, आमा, हजुरबा, हजुरआमाले बालबालिकालाई व्यवहारिक किसिमले सिकाउँछन ।
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरुको सम्बर्धन गरौं भनि बाल्यकाल देखि नै बालबालिकाहरुलाई सिकाउँछन । जापानीहरुले आफ्नो ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्धन गरि आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षण गरिरहेका छन ।
जष्ट इन टाईम
जापानीहरुको कार्य संस्कृतिको कुरा गर्दा अहिले पनि सर्बत्र चर्चा गरिन्छ, प्रत्येक काम अहिल्यै सम्पन्न गरौं । प्रत्येक काम कुन समयमा गर्ने हो सोहि समयमा गरियो भने मात्रै यसको महत्व हुन्छ । समयको सम्मान गर्न पनि प्रत्येक काम जुन समयमा आबश्यक पर्दछ त्यसको समय सिमा भित्रै निर्णय गर्ने र सोहि समय अनुसार कार्यन्वयन गर्ने हो ।
हामीले सिक्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको हामीले सरकारी कामकाजलाई नागरिक बडापत्र राख्ने अभ्यास त गरेका छौं तर नागरिकहरुले सोहि बमोजिमको सेवा समय सिमा भित्रै उपभोग गर्न पाएका छन कि छैनन भनि स्थानीय निकायहरुमा मात्रै पनि अभ्यास गर्न सक्यौं भने तत्काल उपयोगमा ल्याउन सक्छौं ।
एउटा रमाईलो प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ । जस्तो कुनै एक कम्पनीको रणनीति योजना तयार हुन्छ । त्यो रणनीतिक योजना बमोजिम व्यापार प्रवद्र्धन गर्न बजारमा होर्डिङ्ग वोर्ड राख्ने भन्ने हुन्छ । भोलिपल्ट उज्यालो हुँदा प्रवद्र्धन शाखाले शहरभरि होडिङ्र्ग वोर्ड टाँगी सकेको पाईन्छ । कार्यालय पुग्दा आफ्नै कम्पनीका अन्य कर्मचारीहरु नै छक्क पर्छन । त्यो हो जापानी व्यवस्थापन पद्धति जष्ट इन टाईमको एक नमुना ।
प्रकृति र वाताबरणको प्रति सचेत बनौं संरक्षण गरौं
जापानीहरु आफ्नो वरिपरिको वातावरण र पर्यावरण प्रति अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन । औद्योगिक प्रतिष्ठान र व्यापार व्यावसायमा मात्रै होईन शहरीकरण र आवासीय क्षेत्रहरुमा समेत वातावरण विनाश गर्नुहुँदैन । प्रकृति प्रदत्त कुराहरुको संरक्षणबाट मात्रै मानव सभ्यताको विकास हुन्छ भन्ने व्यवहारले गर्दा संसारको अधिकतम औद्योगिक शहरहरु भएर पनि जापान सफा र वातावरण मैत्री शहरको रुपमा प्रख्यात रहेको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना क्रियाकलापहरु वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भन्ने संस्कृतिको विकास र प्रवद्र्धनले गर्दा नै जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रलय र विपत्तिमा पनि जापानले आफ्नो वातावरण सन्तुलन कायम राख्न सकेको छ ।
प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौ
जापान आफैंमा खानी तथा कच्चा पदार्थ भएको मुलुक होईन । जापानले औद्योगिक कच्चा पदार्थ अर्को मुलुकबाट आयात गर्छ । विज्ञान र प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगबाट संसारलाई आबश्यक पर्ने औद्योगिक उत्पादनहरु तयार गरि उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरु संसार भर बिक्री वितरण गर्दै आई रहेको छ ।
प्रत्येक क्रियाकलापलाई विज्ञान प्रविधिको माध्यमबाट सम्भव भए सम्म प्रविधि औजारको प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकास गरेका छन । घाँस काट्ने, धान रोप्ने जस्ता कृषि कार्यहरुलाई पनि मेशिन औजारको प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकासले नै प्रविधिको प्रयोग जीवन पद्धतिमा जोडिएको छ । प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगबाट छिटो छरितो र सुविधाजनक कार्य गर्न सकिने संस्कृति नै जापानको विकास र आर्थिक बृद्धिदरको एक आयाम हो ।
भर्खरमात्र जापानको टोकियो शहरमा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम लिएर फर्किएका एक बैंकर भन्छन –जापानीहरु प्रत्येक दिन कार्यालय पुगे पछि सबै आ–आफ्नो विभाग शाखा वा कार्यालयका कर्मचारीहरु पहिले सबै जना सर्कलमा बस्छन र आज दिनभरी कसले के काम गर्ने हो कार्य योजनाको बारेमा छलफल गर्छन । यसरी छलफल गरि कसले के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने स्वतत्ररुपमा सुझाव दिन्छन । र कार्यालय समय पश्चात पनि सबै त्यसैगरि जम्मा हुन्छन । हामीले आज दिनभर के के काम ग¥यौं ? त्यसको समीक्षा गर्छन । के कुरामा सुधार गर्नु पर्छ ? सबैले सबैलाई सुझाव दिन्छन । भोलि फेरि सुधारका सम्भावनाहरु खोज्छन् । कार्यालयमा सेवा वा बस्तुको उत्पादनमा सुधार गर्न कोहिबाट पनि समीक्षा र सुझाब लिने र त्यसलाई अबलम्बन गर्ने संस्कृतिको विकासले गर्दा नै जापानी व्यवस्थापन पद्धति संसारभर अनुकरणीय र अनुसरणीय भएको हो ।
टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट अर्थात् सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन जापानीहरुले अबलम्बन गरेको अर्को व्यवस्थापकीय पद्धति हो । जापानका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा एउटा यस्तो दार्शनिक मान्यता स्थापित छ कि हामी सबै बस्तु वा सेवाको गुणस्तरमा अभिबृद्धि गर्न सक्दछौं । सुधार सधैं सम्भव छ । सुधार सधैं अनिवार्य छ । यो कार्य संस्कृतिले गर्दा नै सम्पुर्ण क्षेत्रहरु औद्योगीक, व्यापारिक एवं सेवाका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको पाईन्छ ।
प्रत्येक तहमा भ्यालु एड गरौ
कुनै पनि कामको प्रकृति कामका चरणहरुमा विभाजन गरिएको हुन्छ । जस्तो एउटा सामान उत्पादन गर्दा विभिन्न दश पन्ध्रवटा तह पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जापानीहरु यस्तो मान्यता राख्छन कि हामी प्रत्येक चरणमा लागत घटाउन सक्छौं । समय घटाउन सक्छौं र खेर जाने कुरा घटाउन सक्छौं । प्रत्येक तहमा वा चरणमा काम गर्नेले आफुले आफ्नो तहबाट सक्दो योगदान गर्नुपर्छ र त्यसमा भ्यालुएड गर्नु पर्छ भन्ने नै हो । त्यसबाट सबैमा काम प्रति आफ्नो उत्तरदायित्व र भूमिकाको उच्चतम योगदानप्रति प्रतिवद्धता बढाउँदछ । जापानी व्यवस्थापन अबलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्दै एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन –संस्थाको प्रत्येक कर्मचारीलाई संस्थाको भिजन, मिसन, गोल, रणनीति र कार्यक्रमको बारेमा राम्रो जानकारी भएमा मात्रै सबै कर्मचारीले आफ्नो तहमा कामको भ्यालु बढाउन सक्छन । त्यसैले जापानी व्यवस्थापन शैली सबै कर्मचारीको उचित परिचालन गर्ने एक अनुपम औजार हो ।
मानवीयताको ख्याल गरौं
बुद्ध धर्म र संस्कृतिको आचरणका कारण पनि हुन सक्छ जापानी व्यवस्थापनमा मानवीयताले उच्चतम मान्यता र महत्व राखेको पाईन्छ । प्रत्येक मानिसको महत्व हुन्छ । प्रत्येक मानिसको बारेमा सोच्ने र व्यवहारगर्ने सबालमा उच्चतम मानवीय पक्षको ख्याग गर्दा मात्रै उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने अगाध विश्वासका कारण प्रत्येक काममा वा उत्पादनमा उच्चतमा मानवीयताको ख्याल गरिन्छ ।
नीजि कम्पनीमा काम गर्नेहरुले समेत कामदार र मालिक दुबैमा मानवीयताको पक्ष बराबर हुनुपर्छ भन्ने आदर्श स्थापित छ । प्रत्येक कर्मचारी वा कामदारले म मेरो आफ्नै नीजि सम्पत्ति र नीजि फाईदाको लागि काम गरिरहेकोछु ।
यो कम्पनी मेरो आफ्नै हो भन्ने धारणा भित्रै गढेर रहेको हुन्छ । तब मात्र प्रत्येक कर्मचारी वा कामदारले आफ्नो मानवीय क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्दछ । यसले व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमताको उच्चतम प्रयोग हुन्छ । आत्म सन्तुष्टि पनि बढ्दछ ।
कार्यसम्पादनको आधारमा तलब सुविधा
पर्फरमेन्स वेस्ड पे प्रणाली अर्थात कार्यसम्पादनको आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने पद्धति एक किसिमको नो वर्क नो पे भने जस्तै हो । राम्रो कार्यसम्पादन गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन र राम्रो कार्य सम्पादन नगर्नेलाई स्वतहः कम महत्व दिने संस्कृतिले प्रत्येक व्यक्तिमा आफुले राम्रो गरौं राम्रो कार्यसम्पादनको मुल्यांकन हुन्छ । सोहि अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुने पद्धतिले व्यक्तिगत तहमा अत्याधिक उत्प्रेरणा जाग्छ । एक किसिमको अपनत्व भाव श्रृजना हुन्छ । मानव श्रोत व्यवस्थापनमा लामो अनुभव संगालेका ती बैंकरले भने, जापानीहरुले आफ्नो कर्मचारीहरुको सामाजिक आर्थिक अबस्था के छ त्यसको रेकर्ड राखेका हुन्छन । आबश्यकता अनुसार परिवारका सदस्यहरुलाई झै सबै कर्मचारीलाई व्यवहार गर्छन ।
त्यसैले उखर्माउलो गर्मीमा पनि जापानीहरु काँधमा निलोकोट भिरेर सेतो सर्टमा सडकमा असिनपसिन गर्दै आफ्नो कामप्रति बफादार हुन्छन् । कामप्रतिको वफादारीता सम्बृद्धिको पहिलो सिंढी हो ।
जापानीहरु तलबाट माथि (बटम अप एप्रोच) सहभगिता, सहकार्य, र उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिताको अबधारणालाई आफ्नो व्यवस्थापनको आदर्श मान्दछन । सबैको सबै तहमा हुने सहभागिताले मात्रै सुशासनको सुनिश्चिता हुन्छ भन्ने मान्यता रहेकोछ ।
नीति निर्माणको तहमा व्यापक सहभागिता र छलफलबाट मात्रै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सबैमा अपनत्वको विकास भई मुलुकको सम्बृद्धि सम्भब भएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले यस किसिमको नीति अबलम्बन गर्दा सम्पूर्ण संघ संस्थाहरुले पनि सोहि अनुरुप निर्णय गर्ने कार्य संस्कृतिको विकास भएको छ ।
हामी किन अनुसरण गर्दैनौं सम्बृद्धिको ?
सम्बृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा हामिले विभिन्न देशले संबृद्धि हासिल गरेका व्यवस्थापनका अभ्यासहरुको अनुसरण गर्न सक्छौं । हामीले हाम्रो सम्बृद्धि हासिल गर्न सक्दछौं । हाम्रो नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुले, कर्मचारीतन्त्रले, योजना तथा विकासविद् भन्नेहरुले, पेशाकर्मी, उद्यमी, व्यावसायीहरुले समय समयमा गर्ने विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुको भ्रमण गर्दा ती देशको विकास र सम्बृद्धि नदेखेका भने होइनन् । तर किन गर्दैनन् सम्बृद्धिको अनुशरण ? प्रश्न गर्ने जिम्मा आमपाठकहरुको ।